हिन्दी फिल्म जोडजाड गरेर लिलि बिली बनेको खुलासा - Machhapuchhre FM
हिन्दी फिल्म जोडजाड गरेर लिलि बिली बनेको खुलासा
Published by Machhapuchhre FM at 2018-04-19
स्कटल्यान्ड तपाईंको ‘ड्रिम कन्ट्री’ हो र पर्दामै भए पनि त्यहाँका दृश्य देख्दा तपाईंको मन रमाउँछ भने ‘लिलि बिली’ हेर्नु राम्रै अप्सन हुनसक्छ। तर राम्रो फिल्मको खोजी हो भने हलसम्म नगएकै जाति। फिल्ममा जति सुन्दर दृश्य कैद गरिएका छन्, फिल्म भने त्यति सुन्दर बनेको छैन।
न फिल्मको कथा ताजा छ, न कथा भन्ने शैली नै मनोहर छ। हिरोइन रुँदा हिरोले फकाउने, हिरोइन अपहरणमा पर्दा हिरोले बचाउने, हिरोइन हिरोसँग हुँदा बुबा छुट्टयाउन आउने! दर्शकले सयौंपल्ट हेरिसकेका दृश्यले ‘लिलि बिली’ भरिएको छ। दर्शकलाई लोभ्याउने ताजा भनेको फिल्मको लोकेसन मात्रै हो।
फिल्ममा आभाष (प्रदीप खड्का) र श्रुती (जसिता गुरुङ) को प्रेमकथा छ। प्रेमीसँग ब्रेकअप भएकी श्रुतीको भेट शौचालयमा रोइरहेको अवस्थामा आभाषसँग हुन्छ। र, फिल्मको कथा सुरु हुन्छ। बिस्तारै उनीहरु नजिक हुन्छन्, सँगै घुम्छन्, रमाइलो गर्छन्। दुईबीच अलिअलि प्रेम पलाइरहेको बेला त्यतिबेलै घरमा जसिताको ‘इन्गेज्मेन्ट’ तय हुन्छ। त्यसपछि यी दुईको सम्बन्धले कस्तो मोड लिन्छ? दुईजनाको सम्बन्धका कारण उत्पन्न हुने घटना र परिस्थिति नै फिल्मको मूल कथा हो।
प्रेमकथामा बन्ने यस्ता फिल्मबाट प्रायः निर्देशकको एउटै उद्देश्य हुन्छ– स्वादिलो प्रेम कहानीमार्फत दर्शकलाई रमाइलो गराउने। तर, दुःखको कुरा, यो फिल्ममा निर्देशकले भन्न खोजेको कहानी घिसिपिटी छ। खँदिलो भएन। यो फिल्म हेर्दै गर्दा सिनेमा बौद्धिक उत्पादन हो भन्ने कुरा बिर्सिएकै जाती।
हिन्दी फिल्मका नियमित दर्शकले कुन सिन कहाँबाट प्रभावित हो सजिलै खुट्याउन सक्छन्। फिल्म हेर्दै गर्दा करण जोहरको ‘दिलवाले दुल्हनीया लेजाएगें’, ‘कभी अलबिदा ना कहना’, इम्तियाज अलीको ‘जब वी मेट’ लगायत हिन्दी फिल्मका दृश्यको झल्को आउँछ मज्जाले।
निर्देशक मिलन चाम्स र पटकथाकार प्रदीप भारद्वाजले विभिन्न फिल्मका दृश्य जोडेर पर्दामा सुन्दर प्रेम कहानी भन्ने जुन चलाखीपूर्ण प्रयास त गरे तर त्यो दर्शकको अगाडि फ्लप भइदियो। दर्शकले फिल्ममा देखाइने दृश्यका स्रोत सजिलै खुट्याउन सक्छन्।
फिल्म दृश्यभाषाको बलियो माध्यम हो। तर ‘लिलिबिली’ हर्दै गर्दा यही यथार्थलाई निर्देशकले बेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ। सकेसम्म कम संवादको प्रयोग गर्नुलाई एउटा असल फिल्म निर्देशकको गुण मानिन्छ तर यो फिल्ममा धेरैजसो दृश्य संवादप्रधान नै छ।
फिल्ममा विक्रमको रोल गरेका अनुपविक्रम शाहीको चरित्र चित्रण अस्वाभाविक लाग्छ । आभाष र श्रुतीप्रति जागेको बदलाको भावना एकाएक हराउनु विश्वसनीय लाग्दैन। फिल्ममा उनलाई जसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यो हेर्दा उनको चरित्र त्यति आवश्यक देखिँदैन।
फिल्ममा सुदिप बरालको सिनेमाटाग्राफी राम्रै छ तर यति भन्दाभन्दै स्कटल्यान्ड आफैँमा सुन्दर र प्राकृतिक रुपमा धनी देश हो भन्ने यथार्थ भुल्नुहुन्न। किनभने सुन्दर दृश्य स्वाभाविक रुपमा क्यामेराले सुन्दर नै देख्छ। त्यसैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएका दृश्य खिच्दै गर्दा उनले कति कलात्मकता देखाए त्यो बहसकै पाटो हो।
यो फिल्मका अभिनेता प्रदीप आफूलाई स्टार पथमा डोर्याइरहेका अभिनेता हुन्। उनको फ्यान फलोइङ राम्रै छ। ‘प्रेमगीत’बाट उनी दर्शकको नजरमा परेका हुन्।
यो फिल्ममा उनको अभिनय उन्नत छैन तर पहिलेभन्दा कम पनि छैन। आफू ‘स्टार’ हुन खोज्ने अभिनेताको असल गुण अभिनय मात्रै गर्नु होइन, राम्रो स्क्रिप्टमा काम गर्नु पनि हो। उनले फिल्म छनोटमा गम्भिरता नदेखाउने र अब पनि यस्तै फिल्म रोजिरहने हो भने उनको करिअरको ग्राफले उकालो नाप्न सक्दैन।
यही फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यु भएकी जसिता गुरुङको पहिलो प्रयास प्रशंसनीय छ तर केही–केही दृश्यमा भने उनले ‘ओभरएक्टिङ’ गरेको महसुस हुन्छ। प्रियंका कार्की आफ्नो चरित्रमा फिट छिन्। फिल्मको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक ठीकै छ तर ठाउँ–ठाउँमा दृश्य र कथाअनुसार लय गुमाएको भान हुन्छ। यसले दर्शकलाई ‘इरिटेट’ बनाउँछ।
दर्शकको संवेदनालाई छुनु र आत्मीय महसुस गराउन सक्नु एउटा सफल लभस्टोरी फिल्मको गुण हो। यसमा ‘लिलि बिली’ चुकेको छ। पर्दामा पात्र पटकपटक रुँदा दर्शक गलल हाँस्नु पक्कै राम्रो फिल्मको संकेत होइन।
यो फिल्मको तारिफयोग्य पक्ष– नेपाली फिल्म युरोपमा छायांकन हुनु मात्र हो। सँगसँगै तीतो यथार्थ पनि छ– फिल्ममा जति खर्च गरिएको छ, नतिजा त्यसअनुसार देखिँदैन।
फिल्म युरोप त पुगेको छ। त्यहाँका खोलानाला, डाँडापाखा, चिल्ला–चिल्ला सडक र सुन्दर घरहरु त देखाइएको छ तर हुनुपर्ने गुणस्तर भने हराएको छ। न कथा मौलिक छ, न कथा भन्ने शैली। अरू कुनै भाषामा डब गरेर हेरियो भने पक्कै पनि यो फिल्मलाई नेपाली भन्ने आधार रहँदैन।
सुन्दर दृश्यहरुको भीड हुँदैमा फिल्म पक्कै राम्रो हुँदैन। तैपनि दृश्यमा रमाउने दर्शकहरु यो फिल्मबाट पक्कै रमाउलान् तर फिल्ममा बलियो कथा र प्रस्तुति खोज्नेहरु खुसी हुँदैनन्। यो फिल्म नयाँ खोलमा प्याक गरिएको पुरानै चकलेटजस्तै हो। फ्रेस लोकेसनमा खिचिएको एउटा बासी लभस्टोरी जसले नेपाली फिल्मको संख्या मात्रै बढायो। शुक्रबार साप्ताहिकबाट
The post हिन्दी फिल्म जोडजाड गरेर लिलि बिली बनेको खुलासा appeared first on News Portal of Global Nepali.
थाहै नदिई आफ्नो घरजग्गा अर्कैल...
के भन्छन् उद्योग मन्त्री ? खनि...
नेपालको ‘खानी कथा’ (भाग–४): सम...
नेपालको ‘खानी कथा’ (भाग–३), कि...
नेपालको ‘खानी कथा’(भाग–२), ओगट...
नेपालको ‘खानी–कथा’ ! अवस्था, स...
प्रदेश ७ को विज्ञापन प्रदेश ५ को पत्रिकामा छापि बजेटको दुरुपयोग । कार्यालयमा ताल्चा, हाकिम गायव
म्यानपावरको धरौटी ६ करोड बनाउने तयारीमा गोकर्ण बिष्ट । बिजुली चोर्दै सशस्त्र प्रहरी !